Video: RW Norway, Erna Solberg oo fariinteeda ciida la wadaagtay muslimiinta aduunka. - NorSom News
Video: RW Norway, Erna Solberg oo fariinteeda ciida la wadaagtay muslimiinta aduunka.
Reysulwasaaraha Norway, Erna Solberg ayaa fariin muuqaal ah oo ay soo duubtay muslimiinta caalamka ugu hanbalyeysay munaasabada ciidul Fidriga, iyada oo sidoo kale ku baaqay in wali la ilaaliyo shuruucda xakameynta xanuunka Covud-19.
Previous articleSweden: 13-jir ku eedeysan dilka haweenay 50-meeyo jir ah.
Next articleGabar 27-sano jir wasiir ka noqotay mid kamid ah wasaaraddaha ugu culus Norway.